Sunday 3rd of July 2022 / 10:42:04 AM
नेपालमा‌ मात्र नभएर दिन प्रति दिन विश्वको आकडा निहालदा आजको युवापुस्तामा यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा पिडित जनसमुदाय को बहुल्यता उच्च स्थानमा रहेको ‌छ । हाम्रो नेपाली समाजमा रोगको सुनिश्चितता नगरिकन विविन्न उपनाम दिने गरिन्छ । जसरी
गाउँमा एकजना भलाद्मी मानि`सकाे नि धन भएछ । उसका छाेरा`हरू र छर`छिमेक मिली ला स जलाउन लैजाने तयारी भइ`रहेको समयमा एक अपरिचित व्यक्ति आउँछ र ला स को पाउ समात्दै भन्न लाग्छ “म र्ने मानिसले मसँग १५ लाख लिनु भएकाे थियाे, पहिला मला`ई उक्त पैसा कसल
छिटो छिटो सास फेर्नु वा सास फेर
गर्मी लाग्न थाल्यो । यसले स्वास्थ्यमा विभिन्न तरिकाले असर पार्छ । आयुर्वेदमा गर्मीलाई ग्रीष्म ऋतु भनिन्छ । आयुर्वेदले गर्मी महिनामा खान हुने वस्तुका विषयमा बताएको छ ।
गर्मीमा पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । शरीरलाई बढी तात्न नदिनका लागि जठर
खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका
स्वस्थ मनको लागि स्वस्थ शरीर नै अनिवार्य हुन्छ । यो पुरानो भनाई हो तर शाश्वत सत्य पनि । जे भए पनि यदि हामी हाम्रो कुराकानीमा केही चीजहरू समावेश गर्दछौं र केही नियमहरू पालना गर्दछौं भने हामी आफैंलाई बढी सजिलै फिट राख्न सक्छौं । यसको लागि केही महत्व
मूला जमिनभित्र फल्ने हुने तरकारी हो। वस्तुतः यो एक रूपान्तिरत प्रधान जरा हो जुन बीचमा मोटो र टाउकोहरू तिर क्रमशः पातलो हुन्छ। मूला पुरा विश्वमा उमारिन्छ र खाइन्छ। मूलाका अनेक प्रजातिहरू छन् जुन आकार, रंग एवं पैदा हुन लाग्ने समयको आधारमा
अमला खानुका औषधिजन्य फाइदा
अमला नेपालमा पाइने एक किसिमको रूख हो। यसलाई संस्कृतमा आमलकी भन्ने गरिन्छ। यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक अमला गुणी जडिबुटीमा पर्छ । अमला भिटामिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुप
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन प्रयोग भएका विभिन्न उपायमध्ये स्यानिटाइजरको प्रयोग पनि एक मानिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले पनि स्यानिटाइजरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।
तर, विश्वभर कोरोना माहामारीसँगै बढ
अनलाइन दर्पण 2020-06-20
अनलाइन दर्पण 2020-05-22
गर्मी भन्नासाथ पसिना, दुर्गन्ध, डिहाइड्रेसन, बेचैनी, आलस्यता तथा उर्जाको कमी भएजस्तो लाग्नथाल्छ । यद्यपि, हामीले केही सावधानीहरु अपनायौं भने गर्मी मौसममा पनि हामी फिट रहन सक्छौं, फुर्तिलो रहन सक्छौं, आलस्यतालाई हटाउन सक्छौं । गर्मी मौसममा खानपिनको
अनलाइन दर्पण 2020-05-19
स्वास्थ्य सफलताको जग हो । स्वास्थ्यको महत्वलाई दर्शाउँदै नीतिमा भनिएको छ, संसारमा प्रमुख सात सुखहरू छन्ः प्रथम सुखः निरोगी शरीर । द्वितीय सुखः पर्याप्त आय । तृतीय सुखः मधुरभाषिणी पतिव्रता पत्नी वा पत्नीव्रत पति । चतुर्थ सुखः बुद्धिमान र आज्ञाकारी
जब हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ । यस किसिमको समस्यालाई सताइरहन्छ । अतः यस्तो समस्याकै कारण हाम्रो दैनिक कार्य तालिका बिग
पाद्नु भन्ने शब्द सुन्दा कताकता लाज लागे पनि यो संसारमा सबैले पाद्छन् नै । तैपनि सार्वजनिक स्थलमा पाद्नु असभ्यताकै प्रतीक मानिन्छ । यद्यपि पाद्नुका थुप्रै आश्चर्यजनक फाइदा हुन्छन् ।
१. पाद्नु ठूलो आन्द्राका लागि धेरै राम्रो हो: पाद
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ?, मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसर
अनलाइन दर्पण 2020-04-18
आम मानिसहरु अलैंचीको प्रयोग मसलामा र माउथ प्रेसनरको रुपमा गर्दछन् । चियामा राखिएको अलैंचीले यसको स्वादमा वृद्धि गर्दछ । अलैंचीको फाइदा यसमा मात्र सिमित छैन । यदि तपाईं अलैंची खाएर तातो पानी पिउनुहुन्छ भने तपाईंले यसको दोब्बर फाइदा प्राप्त गर्नुहुन
जब रोगले च्याप्छ, हाम्रो धेरै कुरा अस्तव्यस्त हुन्छ । हामी दिनदिनै अस्पताल धाउनुपर्ने हुन्छ । औषधि खानुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कामधन्दा बिग्रिन्छ । आफ्नो मात्र हो र ? परिवारको दैनिकी अस्तव्यस्त हुनपुग्छ । सबैमा चिन्ता थपिन्छ । त्यसैले त भनिएको हो, रोग
कोरोना विरुद्ध ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्दा कस्तो खानपान उचित ? जानी राखौ
अनलाइन दर्पण 2020-04-15
कोरोना भाइरसको भय बढेसँगै समाजमा अनेक कुराहरु आए, खासगरी खानपानलाई लिए । यस्तो कुरा खाए कोरोना लाग्दैन, यस्तो खानाले भाइरस हटाउन सकिन्छ । इत्यादि ।
कुनै पनि जीवाणुको संक्रमण हुन नदिन खानाको प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएता पनि कुनै खाना खाँदा